Indlela yokwenza i-Splits kwiiNqanaba ezili-8
Midlalo Izifundo kunye nezifundo
Funda indlela yokwenza ulwahlulo: Qalisa ngokuThetha
Ukwahlukana ngenye yale ntshukumo elula ngokwenene kwabanye abantu kwaye kunzima kwabanye. Kodwa phantse nabani na ongenza ukwahlukana! Nangona unzima njengokuba unako, kunjalo, uya kukwazi ukuyiqonda xa usebenza kanzima ekusaluleni kwakho.
Indlela ephezulu yokufumana (okanye ukuphucula) ukuhlukana kwakho kukuhamba ngoluhlu lweendlela ezihlukeneyo, ukusuka kumlula ukuya phambili. Ukuba ungumqalisi, mhlawumbi ufuna ukuqonda ukuba kulula ukunweba kuqala ngaphambi kokuba uqhubekele kwizahlulo ezihlukeneyo.
Qinisekisa ukuba wenze isondlo ngasinye emacaleni omabini - uya kufuna ukwahlula kakuhle emlenzeni wakho ongakwesokudla kunye nomlenze wakho wesobunxele ukuze ube ngumdlali omhle wokuzivocavoca.
Ukusuka kwindawo eguqa, faka inyawo elinye phambi kwakho kwi-mat, isinyathelo, okanye enye into malunga neenyawo okanye ngaphezulu emhlabathini.
Bendela umlenze wakho ukuya kuma-degrees angama-90, kwaye ubeke unyawo lwakho lugqithise kwi-mat.
Ukugcina izikhwepha zakho zijongene nomtya, susa umlenze wakho ngasemva, uguqa ngamadolo emva kwakho, de uze ubenze "ulwahlulo lwama mini" ukusuka emadolweni ukuya emadolweni.
Gxotha iinqumlo zakho ngokubanzi kunokwenzeka, usebenze kuma-degrees angu-180 ukusuka emadolweni ukuya emadolweni.
Gcina isifuba sakho kunye nezandla zakho phambi kwamadolo akho.
Yibambe le solule imizuzwana engama-30-60 ngelo xesha.
Isalathiso sangaphambili soLungqo
Ukusuka kwindawo eguqa, faka umlenze owodwa ngqo ngqo phambi kwakho kumatshini.
Hambisa umzimba wakho, ngoko ke isithende sakho sisekuhlaleni.
Umlenze wakho wempuphu kufuneka ube ngecala elingama-90, kwaye iinqumlo zakho kufuneka zibe "isikwere" - kufuneka zijongane nomtya, ungaphenduli enye indlela okanye enye.
Ukugcina ngqo umlenze wakho wangaphambili, uncike phambili ngokukhawuleza.
Uthotho lweeNtshontsho zombini
Ukusuka kwindawo emileyo, faka umlenze owodwa kumatshini phambi kwakho.
Ukugcina imilenze yomibini iqonde kunye nesigcaba sakho seenyawo, sithembe phambili ngokubanzi.
Inyawo lakho lokubuyela kufuneka lityalwe emhlabeni, unyawo lwakho luqonde okanye lujike kancane.
Hambisa phantsi uze uzame ukuhlukana ngokupheleleyo. Xa ukwahlula, qiniseka ukuba:
Iinqumlo zakho zikwele kunye nomzimba wakho. Isihlunu sakho kufuneka sijongane ngqo, kungekho kwicala, nokuba ukugqithisa iminqweno yakho kuthetha ukuba awukwazi ukuhla ukuya kude
Yomibini imilenze yakho iqonde kwaye ijika kancane ngaphandle
Iinzwane zakho zichazwe
Isifuba sakho siphakanyisiwe, singaxhomeki phambili
Isicatshulwa sokuqala: Ukuba awunako ukulungelelanisa ngokwaneleyo ukwenza ukuhlukana ngezandla zakho ngokukhululekile emgangathweni, zama ukuhlula phakathi kwezinto ezimbini - izikiti, izibhengezo (njengoko kuboniswe ngasentla), okanye iincwadi zinokukunika into yokubeka izandla zakho . Emva koko uya kuba nokwenza ulwaba ngaphandle kokugxila phambili kunye nomzimba wakho.
I-Square Out Your Split
Ukuze uqinisekise ukuba iinqunqa zakho zikwere, zama ukuhlukana kwakho nodonga. Umjikelo wakho wempuphu kufuneka ube malunga nokuchukumisa udonga, kwaye umlenze wakho wempuphu kufuneka ulungele kwi-angle-degree ye-90 ukuya phezulu. Qinisekisa ukuba unyawo lwakho lwentsimbi lukhomba ngqo kwilayili.
Unokwenza oku kulula kunye nomhlobo obambe umlenze wakho kwaye kukunceda ugcine unyawo lwakho lubhekise ngqo.
Ukuba unokwazi ukwenza ulwahlulo lwesibhakabhaka phantsi, lixesha lokubeka unyawo lwakho phezulu. Oku kwandula imilenze yakho ngakumbi kwi-oversplit - okanye ulwahlulo olungaphezu kwama-180 degrees.
Ngakumbi nangaphezulu kwoluhlu, ngaba ulwahlula phakathi kwamatye amabini okanye amabini amabhodi.
I-Ring Leap Stretch
Enye inkqubela phambili yabasetyhini kukusebenzela ukukhwela . Ukwenza oku, phindela emuva uze unyuse umlenze wakho phezulu entloko yakho. Umhlobo unokukunceda ngale nto ngokubamba ngeengalo zakho nokuxhasa umlenze wakho kukunceda uhlale kwindawo.
Unyawo lwakho lufanele lufike entlokweni yakho ngqo, kungekhona kwinqanaba (khangela isithombe esentla).
IsiCwangciso sokuSikraza esisisiseko sigxina
Indlela Yokufundisa Iqela Eliqalayo Yonke Isifundo Sokukhwela Izifundo
Iiklabhu zeGymnastics: Fumana Umntwana Wakho Uqale
Shattuck-St. Isikolo sikaMariya: Isikolo seBhodi yeScater skaters
I-Basic Ice Skating Spins
Yiba ngumqeqeshi wokuThuthuka
Indlela yokwenza iCamel Spin
Funda indlela yokwenza i-Bridge kwi-Gymnastics
Indlela Yokwenza I-One-Foot Glide kwiiSikethi zemizobo
I-Swizzles Nceda ii-Skaters ezintsha. Funda ukufunda ukuhamba kwi-Ice
Indlela yokwenza uMlilo oBomvu neBlue Blue
Funda ngeZenzo zokuBambisana
I-American Revolution: Arnold Expedition
Ukubonwa kabini: Iinkwenkwezi zeBhinary
Ukugcina iivili zakho zixhaswe kwiNgqongileyo, ngoKhuseleko lwakho
Indlela ende eya kwiNgxaki: 1848 ukuya ku-1920
Ngaba Ndinokuba Nompu?
I-Swilcan Bridge kwi-Old Course eSt. Andrews
Quotes Young Young
Ukuqonda i-Caliban's Character 'Isiqhwithi'
I-Belle Époque ("Ubudala obuhle")
Uneminyaka emdala kangakanani uMgangatho woLwandle?
Kuthetha ntoni ukuThumela kwiNtetho kunye nokuHlola?
Incwadi ka Yakobi
Imimangaliso kaYesu: Ukuphilisa intombi yomfazi oyiDemon
Indlela yokuHlaziya iPraint
Iindlela eziphambili ze-astronomy ze-Smartphones, iethebhulethi neeKompyutha